Vai al contuto
Spakka Lotto: a free software iji merie na otutu!
Really chọrọ n’ezie ịnwale merie otu abuo ka egwuregwu Lotto? Download a freeware software site ugbu a ThatsLuck!
Tupu ịga n'ihu na-echeta nke ahụ ThatsLuck I nwekwara ike ịchọta ọdịnaya n’efu, ma ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịnọ na-emelite n’ mbipụta kwunye ụgwọ maka ọwa anyị na ► YouTube.
Na egwuregwu nke Lotto Agara m egwu ee ma ọ bụghị ihe dị ka ugboro iri abụọ na ndụ m, n'eziokwu, ọ dọtabeghị m nke ahụ, ikekwe n'ihi na echere m na ọ bụrụ na ịlụ ọgụ megide nọmba 37 (ndị nke Roulette) bụ ihe dị mma, ma hapụ 90 , Ọzọkwa akwụ ụgwọ ọ bụghị nke ọjọọ, ma ọ dị nnọọ njọ!
Ọ dị mma, nke a abụghị ọkwa iji banye na nkọwa nkọwa nke mba Italiantali nwere ntaramahụhụ maka ndị egwuregwu bọọlụ oge ochie a ọtụtụ narị afọ, agbanyeghị na mgbakọ na mwepụ gosipụtara ya na otu nchịkọta dị iche iche dị maka onye ọkpụkpọ ahụ,ambo N'ezie, ọ bụ otu n'ime ihe na-enye nsogbu.
Malite site n'eziokwu a, emepụtara m ọmarịcha igwe ọkụ nke gburugburu, nke m onwe m enweghị ike ikwere ya (ma ọ dị nwute na edebeghị m ihe akaebe ahụ), n'oge gara aga, m meriri euro 625, na-akụ otu akọrọ na wiil Naples.
M chetakwara m na m ji ezigbo ego, were mee ngwa ngwa maka ihe egwuregwu ndị ọzọ, enyere m onwe m na ngwụcha izu na ọmarịcha obodo Naples.
Etu ị ga - esi chọọ ihu ọma gị imeri ha abụọ
Iji Spakka Lotto ị chọghị ọtụtụ nkọwa, naanị: 1. bido mmemme, 2. pịa bọtịnụ mmalite, 3. megharia ngwa ngwa ngwa ngwa ma ọ bụrụ na ịchọrọ yana 4. pịa bọtịnụ Kwụsị.
Spakka Lotto ọ ga - eji nwayọọ nwayọọ bido nwayọ nwayọ, rue mgbe ọ ga - akwụsị n’ikpeazụ wee gosi ọnụọgụ abụọ na wiilị ahụ iji nwalee ọdịmma gị na ha abụọ.
Ọ baghị uru ikwu, ma ọ bụrụ na ị chọrọ n'ezie ka na-agbalị gị chioma merie ma na egwuregwu nke Lotto Ana m akwado ka ị na-ekenye ndị ọzọ n'ezie obere n'usoro nke 2/3 euro kwa egwuregwu, egwuregwu nke Lotto, ọ bụrụ na ọ masịrị gị n'ezie, ọ ghaghị ịnọgide na-abụ ihe ntụrụndụ na-atọ ụtọ nke ị ga-ekenye oke oke ego n'afọ n'afọ.
Ọ bụrụ na ị ka chọrọ ịnwale ya, kwa n'ihi na TV ebe a n'Italytali na-ekwu "... ọ bụrụ na igwu egwu ị gaghị emeri", Spakka Lotto ga - ewepụ gị na mmechuihu nke ịhọrọ ọnụọgụ iji tinye akara na tiketi ahụ Lotto ya mere ndị enyi, hell na mgbakọ na mwepụ na jisie!
Nbudata Nbudata	Spakkalotto.zip - 1 MB
ThatsLuck na Telegram
Categorie Ụgbọelu Nkeji edemede
© 2021 ThatsLuck.com • kere ya GeneratePress